Ronaldo oo kooxdiisa Juventus u soo saaray wareega quarter finalka Champion League… – Hagaag.com
Posted on 13 Maarso 2019 by Admin in Sports // 0 Comments
Cristiano Ronaldo ayaa Kooxdiisa Juventus ku hogaamiyey guul oo u soo saaray Quarter finalka Champions League kadib markii lugtii labaad ay uga badiyeen kooxda Atletico Madrid 3-0 oo asaga wada saxiixay goolashaasi.
Kooxda laga leeyahay Talyaaniga oo lagu naaneeso haweeneydii cajuusada aheyd ayaa dhexda iska qabatay kadib markii guriga Atletico Madrid looga soo badiyey 2-0, sidaa darteed natiijada isku celcelinta ayaa noqotay 3-2.
34 jirkaan reer Portugal ayaa raadinaya inuu markii lixaad koobka Yurub kor u qaado, kaas oo shan jeer kula guuleystay kooxdiisii hore Real Madrid.
Ronaldo ayaa runtii ka dhex muuqday kooxdiisa xalayto, wuxuuna dhaliyey seddaxda gool ee kooxda ku soo baxday.
Dhinaca kale kooxda Manchester City ayaa dersi u dhigtay kooxda Schalke ee laga leeyahay Jarmalka kadib markii ay uga badisay 7-0, una soo gudubtay quarter finalka Champions League.
Kooxda heysata horyaalka Ingriiska ayaa 3-2 ku garaacday Schalke lugtii hore ee ciyaarta markii la isku celceliyo waxaa ay ku soo baxday 10-2, taasi oo fariin u direysa kooxaha kale ee ku soo beegma, waxaana ay ka mid tahay kooxaha loo saadaalinayo qaadista koobka Champions League tartankan.